ऊ पनि त गुलाफ थिई – HostKhabar ::
ऊ पनि त गुलाफ थिई
“महोदय, यसपालिको ‘भ्यालेन्टाइन डे’ त निरस नहोला नि ? के छ प्लान ?”
“केही छैन ।”
उसले बेपर्बाह जबाफ दियो । पश्चिमा संस्कार र संस्कृतिको अनुशरणमा खासै चासो राख्तैन ऊ ।
“अर्को वर्ष तिमेरुसँगै म पनि प्रेमिका लिएर ‘भ्यालेन्टाइन डे’ प्रोग्राममा सहभागी हुन्छु भनेको होइन लास्ट इयर ?” काँधमा हात राख्तै फेरि जिस्क्यायो क्रिसले ।
क्रिस उसको बालसखा । छोटै समय भए पनि पढाइका लागि विदेश गएको उसको नाम किरण थियो, फर्कंदा क्रिस भयो !
“….यसपालि ‘थ्री नाइट फो डेज’ को प्याकेज छ । केही गर् न यार १ चार दिनलाई भाडामा भए पनि खोज् ।” क्रिसको खिसिट्युरीले उसको दिमाग रन्थनियो ।
“दैनिक पत्रिकाले लाएको विज्ञापनको ज्याकेट, कछुवाको खपटा, मकैका खोस्टा…. के नाम दिउँ म तेरो प्रेमलाई ? अर्काले बुन्दिएको डोकोमा बोकेर, डोकैमा छोपेर राख्ने तेरो प्रेमप्रति दया लाग्छ मलाई…..!.”
“जाबो एउटा गर्लफ्रेन्ड नहुनेको यत्रो फुर्ती रु उमेर छिप्पिइसक्ता पनि गर्लफ्रेन्ड बनाउन नसक्ने तँलाई लाज लाग्दैन ‘पुरूष हुँ’ भन्न ?” बीचमा रोक्तै क्रिस जङ्गियो ।
सामान्य कुरामा ठूलै विवाद भयो त्यहाँ । अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको उच्च बिन्दुसम्म पुग्यो उनीहरुको सवालजबाफ । भन्नुनभन्नु भन्यो क्रिसले, केही राखेन बाँकी । सक्तो प्रतिकार ग¥यो उसले पनि ।
अचानक सिर्जिएको त्यो विवादले ऊभित्रको पुरूष जुरूक्कै उठ्यो । चलायमान मात्र होइन, भयङ्कर आँधीबेहरीको रुप लियो पुरूषत्व प्रामाणिकताले । त्यही आँधीले हुत्याएको थियो उसलाई पोखरा ।
पोखरा : कस्ती छु म ?
पर्यटक: भव्य १ एक्लै भोग्न कठिन भो १
पोखरा : सुन्दर ?
पर्यटक : गाह्रो भो सौन्दर्य सहन । त्यसैले फर्कंदै छु ।
पोखरा : केही समय त बस । मात्र मेरा लागि । सुन्दर छु भनेको होइन ?
पर्यटक : सक्तिनँ ।
पोखरा : निष्ठुरी ! दुई दिन त बस । तिमी यसरी फर्कंदा सरकारको पर्यटन वर्ष कसरी सफल हुन्छ ?
पर्यटक : पर्यटन वर्ष सफल बनाउने ठेक्का लिएको छैन मैले । मेरो प्रेम सफल बनाउनु छ । एउटी प्रेमिका खोज्नु छ । दुई दिनपछि हो भ्यालेन्टाइन डे ।
पोखरा : तिम्री प्रेमिका मजत्तिकी सुन्दर छे ?
पर्यटक : तिमीभन्दा पनि ।
पोखरा : छोडीजाने बैगुनीलाई खोज्छौ कि आफ्नै अगाडिको सौन्दर्यमा रमाउँछौ ?
चेतावनी महसुस गर्‍यो उसले ।
पर्यटक : हँ ? ऊ कसरी बैगुनी हुन्छे ? आमन्त्रित पाहुनाको अपमान गर्न न हाम्रो संस्कारले दिन्छ, न त संस्कृतिले सिकाउँछ । प्रेमको निम्ता उनैले दिएकी थिइन्— ग्रिन सिग्नल ।
पोखरा : आह्वान गरेर आफै बेपत्ता हुने बेइमान ? अनि बेइमानको खोजी गर्दै हिँड्ने बेबकुफ ! म कति सुन्दर छु ! हेर, हिमालको काख, पहाड, हरियाली, तालतलैया अनि उनकै केशराशि जस्तो यो झरना १ आँखा चिम्म गरेर आत्मसात् गर त मेरो सौन्दर्य ।
पर्यटक : तिमी सुन्दर छौ । सौन्दर्यकी खानी हौ । तर त्यो खानीसम्म पु¥याउने माध्यम मेरी प्रेमिका हुन् । म उनलाई बिर्सेर तिम्रो सौन्दर्यमा रम्न सक्तिनँ । थेग्न सक्तिनँ तिम्रो मुग्धता । पहिलो पटक मोबाइलमा देखाएकी थिइन् उनले तिम्रो सुन्दर रुप । त्यो दिन आज पनि झलझली नाचिरहेछ आँखामा ।
रातको १० बजे । जाडोको समय । महिना ठ्याक्कै याद भएन ।
अनलाइनमा देखेपछि सोधेँ, “कहाँ छौ ?”
मलाई विश्वास लागेन । उनले फेवातालको फोटो पठाइन् । तालछेउको बत्ती झिलिमिली थियो, रातको समयमा ।
“यस्ता फोटा गुगलमा कति छन् कति !”
त्यसपछि उनले लेकसाइडमा हिँड्दाहिँड्दै भिडियो कल गरिन् । त्यत्तिबेलै मेरो हृदयमा दुई सुन्दर चिजले डेरा जमाए— तिमी र उनी ।
तिमी सुन्दर छौ, उनी पनि सुन्दर । तर तिम्रो सौन्दर्यले जिस्क्याउँछ, कताकता गिज्याउँछ मलाई, उनको सौन्दर्यले राहत दिन्छ । मिठास भर्छ । अन्तर्मनमा कताकता पूर्णता आभास हुन्छ । काउकुती शैलीमा मीठो प्रेम बर्साउँछ । एक प्रकारको आँधी चल्छ ममताको । त्यसै हुटहुटी हुन्छ मनमा । अनि निमेषमै मत्थर हुन्छ र अन्त्य पनि मिठासपूर्ण ।
लेकसाइडको रात्रिकालीन झिलिमिली र शीतलतासँगै उनको सौन्दर्यको रापले हपहपी पोलिरहेथ्यो— भर्चुअल नै किन नहोस् । म सम्झिरहेको थिएँ एली खमारोभ— ‘धेरै व्यक्ति भर्चुअल रियालिटीको पर्खाइमा छन् । म सद्गुण वास्तविकताको पर्खाइमा छु ।’
तुरून्तै मैले उनी असुरक्षित भएको महसुस गरेँ— ‘यत्ति राति ? एक्लै सडकमा ?’
‘पोखरामा कोही एक्लो हुँदैन । फेवाताल, तालवाराही, विन्ध्यवासिनी, वेगनास, माछापुच्छ…… अनि लेकसाइडको रौनक त अझ छुट्टै ।’ उनी मस्त हाँसिन् ।
हुन त निचोरेको कागती भएँ म, तर फेरि पनि लय मिलाउन हासिदिएँ ।
लेकसाइडको झिलिमिलीसँगै उनले बगैंचामा लगेर अड्याइन् क्यामेरा । कस्तो सुन्दर, फूलहरु थरीथरी १
बिजुलीको प्रकाशमा टल्किएको रात्रि सौन्दर्य । साह्रै चित्ताकर्षक ।
एउटा फूलमा भमरो घुमिरहेथ्यो ।
‘राति पनि भमरा आउँछन् बगैंचामा ?’
उनी खित्का छाडेर हाँसिन् । मेरो जिज्ञासा काँचो थियो क्यारे । असान्दर्भिक पनि हुन सक्छ । अथवा अज्ञानताको गतिलो उदाहरण ।
‘देखेनौ ? आए र त देख्यौ । तर यो अभागी भमरो।।।’ फुल कन्फिडेन्टमा थिइन् उनी ।
‘किन ?’ मेरो मलिन स्वर जिज्ञासु बन्यो ।
फक्रँदो फूलको सौन्र्दय मालीले मात्र देख्छ । त्यसैले ऊ हो भाग्यमानी । बिचरो भमरो त पूmल फक्रिएर सुगन्ध छरिन थालेपछि सुँघ्दै आउने बबुरो ! फक्रने र पूर्ण हुने समयको साक्षी त केबल माली न हो ।
फूल सधैं मालीमा सम्भावना देख्छे, तर माली फूलको चाहना, अपेक्षा, आकाङ्क्षा बुझ्न सक्तैन । प्रेमको मीठो विडम्बना हो यो १ फूल सधैं माली चाहन्छे, तर सामना गर्छे भमरो । उसको सम्पूर्णताको साक्षात्कार माली हो । भमरो पूर्णताको हकदार । त्यसैले फूल सधैं ‘सम्भावना’ देख्छे !
तत्कालै ममा उनको सम्पूर्णता साक्षात्कारको रहर जाग्यो— भमरोबाट माली ।
मेरो यही प्रयास प्रेमको बीज थियो सायद !
सबै प्रेमी आफ्नी प्रेमिकालाई सर्वाधिक सुन्दर देख्छन्, सर्वगुण सम्पन्न— सुशील, सौम्य, शान्त अनि मायालु । तर म उनमा भिन्न किसिमको चञ्चलता देख्न थालेको थिएँ ।
फक्रँदो कोपिला मालीको झारीबाट सिञ्चन हुँदै गर्दा उसैतिर निहुरिन्छे । म डराउँछु— मालीले अङ्कमाल गर्छ कि ? उनको अधर चुम्छ कि ? अनि उनको फक्रँदो यौवन।।।
मालीको सहकार्य र सहयात्राको सम्भावनाले म डराउँछु भयङ्कर । उनको यौवनसँग मालीको साक्षात्कार नहोस् कतै, म आराधन गर्न थाल्छु ।
हावाको झोक्का आउँदा पौंठेजोरी खेल्छे । म डराउँछु— कतै उसमाथि हावाको आधिपत्य कायम नहोस् । ऊ पराजित पो हुन्छे कि ? हावाको तीव्र वेगले उसका पुष्ट बन्दै गरेका अङ्गप्रत्यङ्गलाई धुजाधुजा पार्छ कि ? भय बढ्दै जान्छ ।
चर्को हुरीमा पूरै निहुरिएर लालित्ययुक्त जवानी लुकाउँछे । अन्तःस्करणमा मन्द मुस्कान छाउँछ मेरो । फेरि तत्कालै डराउँछु— हुरीले उसको जवानी चुँडाल्छ कि ?
पोखरा : त्यसपछि फेरि भेट भयो तिम्री प्रेमिकासँग ?
पर्यटक : भयो । कैयौं पटक भयो । माली बन्ने मेरो प्रयत्न जारी रह्यो । तर उसले मलाई सधैं भमरो देखी । न ‘म प्रेम गर्छु’ मैले भन्न सकें, न त ‘मलाई प्रेम गर’ भनेर करै गरेँ । ‘म तिमीलाई माया गर्छु’ र ‘तिमी मलाई माया गर्छौ ?’ भन्ने शैली नै मलाई वाहियात लाग्छ । प्रेमको अनुभूति परीक्षाको नतिजा जस्तो हो र ? प्रेममा ‘एस–नो’, ‘डब्लुएच’ जस्ता क्वेस्चन हुनुभन्दा ठूलो मूर्खता केही लाग्दैन मलाई । यो त अनुभूति हो । मैले हृदयमा अनुभूत गरेँ । हरबखत छायामा पनि प्रेम देखेँ ।
हाम्रो प्रेममा बुझाइको अस्पष्टता यही हो सायद ।
पोखरा : डेट गएका थियौ ?
पर्यटक ः आकस्मिकताको डेट थियो त्यो । पूर्वघोषित नभई प्रारब्धले जुराएको । ऐतिहासिक सहरमा ऐतिहासिक डेट । पर्यटक शैलीको त्यो डेट परिभाषाभित्र थिएन । अनौठो, अपत्यारिलो । सपना जस्तो लाग्ने त्यो डेट साह्रै नशालु थियो । रसपानबिनाको नशा । मदिराबिनाको मादकता । वर्णन नै गर्न नसकिने अव्यक्त भावनाको काल्पनिक प्रस्फुटनको शृङ्गारिक डेट ।
पोखरा : नतिजा ?
पर्यटक : अदालतको फैसला जस्तो भाकामा गयो ।
पोखरा : निर्णय आफूअनुकूल नहुने भएपछि फैसला आउनुभन्दा भाकामै गएको जाती । भावनाको अङ्कगणित नमिलेपछि किन ¥याइँ¥याइँ बजाएको प्रेमको बाजा ?
चर्को दबाब वा चेतावनी महसुस भयो पर्यटकलाई ।
पर्यटक : भावना गणित होइन । हाम्रो भावनाको योगफल एउटै हुनुपर्छ भन्ने छैन । भावनाहरु गणित हुने भए उहिल्यै हात लाग्यो एक वा दुई भैसक्थ्यो । जहाँसम्म फैसला र भाकाको कुरा छ, ‘निजहरुले सकार गरेको अपराध प्रहरीको डरले बलजफ्ती गरेको नहोला भन्न सकिएन’ भने जस्तो फैसला प्रतिकूल भए पुनरावेदनको गुञ्जायस हुन्छ अदालती अभ्यासमा ।
पोखरा : ए ! उसो भए तिमी विदेशी डेटको पुनरावेदन गर्न आएका ?
पर्यटक : बिलकुल होइन । उनले पहिलो तारिखको हाजिरी पोखरामै आएर गरेकी थिइन् ।
पोखरा : अनि ?
पर्यटक : सोचेअनुसार हुन सकेन । यसलाई यसरी भनुँ क्यार । मैले सोचे जस्तो भएन । उनी पहिलेकी जस्ती पाइनँ मैले । अथवा, उनको व्यवहार पहिलाको जस्तो थिएन । बिलकुल भिन्न ।
पोखरा : दोस्रो डेट ?
पर्यटक : भर्चुअल ! मैले ‘भिडियो कल गर’ भनेँ, उनले भनिन् ‘वन्ली च्याट १’
म फेरि त्यो बगैंचा हेर्न चाहन्थेँ— फक्रन लागेका ती फूल । फक्रिसकेको होइन । म माली । भमरो बन्ने चाहना पटक्कै थिएन मेरो । उन्मुक्त यौवन होइन, यौवनको उत्कर्ष पनि होइन । शैशवकालदेखि चढ्दो यौवनका सम्पूर्ण चरण हेर्न चाहन्थेँ म ।
यथार्थमै माली, वास्तविक माली, जसको सम्भावना उनैले देखाएकी थिइन् ।
फटाफट भर्‍याङ चढेर बुइँगल पुग्ने रहर थिएन । म घुमेको भ¥याङ चढ्न चाहन्थेँ । त्यो पनि इच्छा लागेको खुट्किलोमा विश्राम गर्दै । तर, म फ्रिज भएँ उनको व्यवहारबाट ।
पोखरा : उनका आँखाले तिमीलाई कहिल्यै प्रेमी देखेनन् । देखेको भए तिम्रा चाहना मर्ने थिएनन् । तिम्रो अनुरोध अस्वीकृत हुने थिएन ।
पर्यटक : तिमीलाई म कसरी सम्झाउँ— प्रेम आँखाले देख्तैन १ प्रेमी आँखाले बनाउँदैन । यो त मनले स्वीकार्ने हो, अनुभूति । आत्माको स्वीकृति । प्रेम देखिँदैन, महसुस हुन्छ । प्रेमको भोकले हृदय जलाउँछ । मेरो हृदय जलेको देख्छौ र तिमी ? मेरो हृदयमा अहिले आगो दन्किरहेछ प्रेमको । देखिन्छ ? दुई दिनभित्र यो आगो निभाउनु छ मैले । पर्सि त प्रणय दिवस ! प्रेमले सिञ्चित गर्नुछ जलेको मनलाई ।
पोखरा : कहिलेदेखि हराई ऊ ?
पर्यटक : दोस्रो पटक तिमीसँगै देखेको थिएँ मैले । त्यसपछि सम्पर्कमै छैनन्, भर्चुअल पनि । म रिसाएको पक्कै थिएँ उनले भिडियो कल नगरेकाले । मलाई च्याट गर्नु थिएन । म तुरून्तै अफलाइन भएँ ।
मेरा हात–खुट्टा ठिहिर्‍याए । घरी म उनलाई मालीसँग देख्न थालेँ, घरी भमरोसँग । मेरा आँखा र सोच काम गर्न छोडेजस्तै भए । निद्रामा पनि फूलमा भमरो बसेको देख्न थालेँ । कहिले भमरो बस्ता थेग्न नसकेर फूलै चुँडिएर भुइँमा झथ्र्यो । कहिले नुघ्थ्यो अनि फेरि आफूलाई समालेर बौरिन्थ्यो ।
सपनाले भ्रम छर्‍यो कि भ्रमले सपनाको साम्राज्य बनायो ? भेउ नै पाउन छोडेको छु ।
घरीघरी ऐतिहासिक सहरको ऐतिहासिक डेट पनि सपनामा आउँछ । तर हिजोआज त्यो डेट खल्लो लाग्न थालेको छ । उनको सौन्दर्यले छायामा पारेको होला भन्ठानेको छु । खोज्नु छ मेरी प्रेमिका । मलाई कत्ति पनि मन छैन यो प्रणय दिवस एक्लै बिताउन ।
पोखरा : मैले भनिसकेँ नि छोडीजाने बैगुनीको पछि नलाग । म पनि कम्ता सुन्दर छैन । आउ स्थिर गराउ आफ्नो मन । उद्वेलित तरङ्गलाई लगाम लगाऊ । यो प्रणय दिवससँगै मनाऊँ ।
पोखराले अङ्कमाल गर्न खोजेको महसुस भयो पर्यटकलाई । ऊ बिस्तारै उल्टो पाइला चाल्दै भन्छ, ‘नआऊ मेरो सामु । नछोऊ मलाई । तिम्रो सौन्दर्य म एक्लै थेग्न सक्तिनँ । त्यसैले म मेरी प्रेमिका खोज्छु ।
भव्य तिम्रो सौन्दर्य,
भव्य तिम्रो मादकता,
भव्य तिम्रो शृङ्गार,
अनि शिथिल म ।
मेरी प्रेमिका जसरी पनि खोज्नु छ । प्रेमका ठेकेदारले, प्रेमका बिचौलियाले, प्रेमका अपहरणकारीहरुले, प्रेमका अपराधीले मलाई जिस्क्याउन पाउने छैनन् यस पटक एउटी पनि प्रेमिका नभएकोमा । कदापि म त्यो हुन दिने छैन । वर्षौंदेखि जिस्क्याउँदै आए तिनीहरु— ‘एउटी प्रेमिका पनि बनाउन नसक्ने नपुंसक’ । म नपुंसक किमार्थ होइन । प्रमाणित गर्नु छ प्रेमिका देखाएर ।
त्यसैले यी बाँकी दुई दिनमा मैले जसरी पनि भेट्नु छ मेरी प्रेमिका । म गएँ । प्लिज मलाई नरोक । म तिम्रो सौन्दर्य एक्लै थेग्न सक्तिनँ । सक्तिनँ, एक्लै सामना गर्न ।
पर्यटक पोखराबाट टाढियो— प्रेमिकाको खोजीमा ।
यत्रतत्र, सर्वत्र भौतारियो । कहाँ खोजेन ? मान्छे हराएको सूचना जारी गर्न मात्रै बाँकी राखेर चारै दिशा खोज्यो ।
पोखराको सौन्र्दय देखाएकी थिई । माली र भमराको भिन्नता पढाएकी थिई । प्रेमको वर्षा गराएकी थिई । फेला परिन निष्ठुरी १ ४८ घण्टा बित्यो । अर्को ४८ घण्टा पनि बित्यो तर उसकी प्रेमिका फेला परिन ।
‘तेरपायँ बाटो हिँड्न सजिलो, ठाडो उकालोले सास मात्रै बढाउने । खुट्टा मात्रै गलाउने । घुँडा दुखाउने । मेरो प्रेमको बाटो तेरपायँ थिएन । ठाडै उक्लन खोजेँ, आफै थाकेँ । सास मात्रै बढायो । घुँडा मात्रै दुखायो । खुट्टा मात्रै गलायो । मनको आँधी रोकेन ।’ चौतारीमा एक्लै फुसफुसायो ऊ । सहरमा प्रणय दिवसको रौनक मत्थर भइसकेको थियो ।
“म आफैं माली हुँ हजुर, आफैंले उमारेको बिरूवा हो ।” सुन्दर फूलका गमलाले भरिभराउ ठेला अड्याउँदै उसको नजिक गएर पूmल बेच्नेले भन्यो ।
पर्यटकको होसहवास उड्यो । तर झड्का कति भोल्टको थियो, ठम्याउनै सकेन । सिकारको खोजीमा भौंतारिएको सिंहको जस्तै नजरले फूल बेच्नेलाई हे¥यो । भन्दै थियो— “यो गुलाफ क्रस कटिङ हो । यो हाइब्रिड । यो गोदावरी, साह्रै राम्रो फुल्छ । अनि यो विशेष खालको गुलाफ । एउटै बोटमा दुई रङ्गका फुल्छ ।”
तत्काल ठूलो हुरी चल्यो पर्यटकको मनमा । मस्तिष्कले सोध्यो, “ऊ पनि गुलाफ थिई, तर रातो कि सेतो ?”
सत्यमोहन जोशी अस्पतालमा भर्ना
कविता : बेड नं. ३०४ बाट